Amahhotela Ukuthengisa Nokuqasha kuvuliwe Realtyww Info
Amahhotela in Pathanamthitta
Amahhotela in Kerala
Amahhotela in Belves
Amahhotela in Dordogne
Amahhotela in Bad Driburg
Amahhotela in Cadouin
Amahhotela in Estagel
1 - 10 ka 763 Uhlu
Ishicilelwe ngu Dimitris Androutsopoulos
ukubuka Amahhotela eshicilelwe 1 day ago
Iyathengiswa | 50200 Sq Ft
Ishicilelwe ngu Keekkadan PM Pvt. Ltd.
ukubuka Amahhotela eshicilelwe 11 months ago
Ishicilelwe ngu David Evans
ukubuka Amahhotela eshicilelwe 6 days ago
Ishicilelwe ngu Ruediger Holey
ukubuka Amahhotela eshicilelwe 1 week ago
Ishicilelwe ngu Annette Reeve
Ishicilelwe ngu Νίκος Τσούσης
Ihhotela lisikhungo esinikezela ngendawo yokuhlala ekhokhelwayo ngesikhashana esifushane. Izindawo ezinikeziwe zingasukela kumatilasi asezingeni eliphansi kwigumbi elincane kuya kumakamelo amakhulu anamabhede amakhulu, aphezulu, umgqoko wokugqoka, ifriji nezinye izinto zasekhishini, izihlalo eziphakeme, umabonakude we-Flatscreen nezindawo zokugeza ze-en-suite. Amahhotela amancane, anenani eliphansi anganikeza kuphela izinsizakalo zezivakashi nezibonelelo eziyisisekelo. Amahhotela amakhulu, anamanani entengo ephezulu anganikezela ngezindawo zokwengeza zezivakashi ezifana nedamu lokubhukuda, isikhungo sebhizinisi (ngamakhompyutha, amaphrinta nezinye izinto ezisehhovisi), ukunakekela izingane, izinkomfa nezindawo zomcimbi, izinkantolo ze-tennis noma i-basketball, indawo yokuzivocavoca, izindawo zokudlela, indawo yosuku kanye neyenhlalo imisebenzi yokusebenza. Amakamelo wehhotela ajwayele ukubalwa (noma aqanjwe kwamanye amahhotela amancane nama-B & B) ukuvumela izivakashi ukukhomba igumbi labo. Amanye amahhotela, amahhotela aphezulu anamakamelo ahlotshiswe ngokwejwayelekile. Amanye amahhotela anikela ngokudla njengengxenye yegumbi nokuhlelwa kwamabhodi. E-United Kingdom, ihhotela liyadingeka ngokomthetho ukuthi lihambise zonke izivakashi ukudla neziphuzo ngaphakathi kwamahora athile abekiwe. EJapan, amahhotela we-capsule ahlinzeka igumbi elincane elungele kuphela ukulala kanye nezindawo zokugezela ezabiwayo.